Mpamatsy fako fampifangaroana fako mifangaro hafanana mora vidy sy hafanana | YiZheng
Inona ny tanky fampivoarana marindrano?
Maripana ambony Tankina fampifangaroana fako sy zezika amin'ny ankapobeny ny fanaovana fermentation aerobic mari-pana be indrindra amin'ny biby fiompy sy akoho amam-borona, fako any an-dakozia, fotaka ary fako hafa amin'ny alàlan'ny fampiasana ny zavamiaina bitika mba hahatratrarana fitsaboana maloto tafiditra izay tsy mampidi-doza, miorina, mihena ary misy loharano.
Ahoana ny fiasan'ny tanky fampifangaroana fako sy zezika？
Voalohany, ataovy ao anaty ny fitaovana Tankina fampifangaroana fako sy zezika avy amin'ny seranan-tsakafo amin'ny alàlan'ny conveyor fehikibo. Eo am-pametrahana ireo fitaovana, atombohy ny motera lehibe, ary ny reducer hafainganana môtô dia mitondra ny hazo lehibe hanombohana mifangaro. Mandritra izany fotoana izany dia mamadika ireo fitaovan'ny biby ireo lelany boribory eo amin'ilay vatan-kazo manelingelina, mba hifandray tanteraka amin'ny rivotra ireo fitaovana ireo, ka manomboka mihombo ny fermentation aerobic ireo fitaovana hozaraina.
Faharoa, ny rafitra fanafanana ny teham-pandrefesana herinaratra eo amin'ny farany ambany dia fehezin'ny boaty elektrika hanombohana ny fanafanana ny menaka famindrana hafanana ao anatin'ny vatan'ny fermenter body. Mandritra ny fanafanana, ny mari-pana amin'ny vatana mangatsiaka dia fehezin'ny sensor amin'ny hafanana mba hifehezana ny hafanan'ny fermenter ao amin'ny tobin'ny fermentation. Ny fanjakana takiana. Rehefa vita ny fanamasinana ny fitaovana dia esorina amin'ny tanky ilay fitaovana ho an'ny dingana manaraka.
Ny firafitry ny Tankina fampifangaroana fako sy zezika azo zaraina ho:
1. Rafitra famahanana
2. Rafitra fanamasinana tanky
3. Rafitra fampifangaroana herinaratra
4. Rafitra famoahana
5. Rafitra fitehirizana fanafanana sy hafanana
6. Ampahany fikojakojana
7. Rafitra fanaraha-maso herinaratra mandeha ho azy
Tombony azo amin'ny fangaro fampifangaroana fako sy zezika
(1) Ny fitaovana dia kely habe, azo apetraka eny ivelany, ary tsy mila fananganana orinasa. Orinasa fanodinana finday izy io, izay mamaha ny olana lafo vidy amin'ny fananganana zavamaniry, fitaterana lavitra ary fanodinana afovoany;
(2) Fitsaboana voaisy tombo-kase, fanalefahana 99%, tsy misy loto;
(3) Ny insulated thermaly tsara, tsy ferana amin'ny vanim-potoana mangatsiaka, dia azo zahana ara-dalàna ao amin'ny tontolo iainana ambanin'ny 20 degre Celsius;
(4) fitaovana mekanika tsara, mamaha ny olan'ny fahasimbana asidra mahery sy alkaly, androm-piainana maharitra;
(5) Fandidiana sy fitantanana tsotra, fitaovana akora fampidirana toy ny zezika biby, mamokatra zezika biolojika, mora ianarana sy miasa;
(6) Ny tsingerin'ny fermentation dia manodidina ny 24-48 ora, ary ny fahaiza-manao fanodinana dia azo ampitomboina araka ny filàna.
(7) fanjifana angovo ambany, mampihena be ny vidin'ny famokarana herinaratra;
(8) Ny karazana aerobika dia afaka miaina sy miteraka amin'ny -25 ℃ -80 ℃. Ireo bakteria mahasoa miforona dia afaka mamono bakteria manimba amin'ny akora. Ity endri-javatra ity dia mahatonga ny zezika biolojika hafa tsy manan-tsahala sy mihoatra.
Fampisehoana horonantsary mifangaro amin'ny fako sy zezika
Safidy fampifangaroana modely amin'ny fako sy ny zezika
Haben'ny fitaovana （L * W * H）
＞ 10m³ (fahafahan'ny rano)
＞ 20m³ (fahafahan'ny rano)
＞ 30m³ (fahafahan'ny rano)
Fitaovana fanamoriana rivotra
Teo aloha: Turner fanangonam-bokatra Hydraulika
Manaraka: Masinina kodiarana Composting Turner Machine